Ukuncelisa ibele nokusebenzisa izidakamizwa | La Leche League SA
UKUNCELISA IBELE NOKUSEBENZISA IZIDAKAMIZWA
Ukuncelisa ibele kuqinisekisa ukuthi ingane yakho inempilo ejwayelekile, iyakukhula futhi nengqondo iyathuthuka. Uma usebenzisa izidakamizwa noma imishanguzo, kubalulekile ukwazi ukuthi lokhu kungaluthinta kanjani ubisi lwakho noma ingane yakho.
Omama bavame ukutshelwa ukuthi abakwazi ukuncelisa ibele kuyilapho bephuza imishanguzo. Ngokuvamile lokhu akulona iqiniso, futhi ukondla ingane ngefomula kunobungozi. Ngaphambi kokuyeka ukuncelisa, funa eminye imininingwane ngokuxhumana ne-La Leche League South Africa. Ungacwaninga ngokuphepha kwemithi ku-www.e-lactancia.org.
I-nicotine esegazini lakho inyusa ingozi yokusheshe ilumule ingane ibele futhi ukhiqize nobisi oluncane. Izingane zababhemayo zisengozini enkulu ye-colic ne-SIDS (Sudden Infant Death Syndrome).
Uma ungeke uyeke ukubhema, kusaphephile ukuthi ingane inceliswe ibele kunokuyincelisa ifomula.
Nciphisa ukubhema nokubhema ngemuva nje kokuncelisa ibele esikhundleni nje ngaphambi kwalokho.
Utshwala bungena masinyane egazini likamama nasebisini lakhe, okunemiphumela eminingi kubo bobabili umama nengane. Ukuphuza ngezikhathi ezithile akulimazi, ikakhulukazi uma ingane ineminyaka engaphezu kwamasonto ayisishiyagalombili futhi ibelethwe ngaphezu kwamahora amabili ngemuva kwalokho. Ukusetshenziswa kotshwala njalo kungaholela ekukhaleni kakhulu, ekunciphiseni ubisi nokukhula kancane, futhi kungathinta indlela ubuchopho bengane obukhula ngayo. Ukusebenzisa utshwala nakho kungathinta indlela onakekela ngayo ingane yakho. Yazi ukuthi uma uphuza kakhulu, kuthatha isikhathi eside ukuthi utshwala bushiye umzimba wakho.
Okuningi kwalesi sidakamizwa kudlulela obisini lwebele futhi lunobuthi ezinganeni. Umusi we-crack cocaine nawo uyingozi enganeni yakho. Omama kufanele balinde okungenani amahora angu-24 ngemuva kokusebenzisa i-cocaine noma i-crack ngaphambi kokuncelisa.
Kunezifundo ezimbalwa kakhulu mayelana nemiphumela yensangu. Kungenzeka kube nomonakalo wesikhathi eside ebuchosheni bengane yakho. Ngemuva kokuyibhema kakhulu, izingane ziba nensangu emizimbeni yazo amasonto amaningi. Omama akumele basebenzise insangu ngenkathi bencelisa ibele.
Uma omunye umuntu ekhaya lakho ebhema insangu, kufanele ayibhemele kude nengane.
I-METHAMPHETAMINE (I-TIK) NE-CRYSTAL METH
Lezi zidakamizwa ziyalutha kakhulu futhi ziyinkinga ekhulayo emazweni amaningi. Alukho ulwazi oluningi lokuthi i-tik ikuthinta kanjani ukukhula kwengane kanye nempilo yayo, kodwa siyazi ukuthi kuhlobana nezinkinga zenhlalo, udlame lwasekhaya namazinga aphansi okuncelisa.
Uma ungumama oncelisayo futhi usebenzise i-tik, kufanele ulinde okungenani amahora angu-48 ngaphambi kokuncelisa futhi noma kuze kube yilapho i-methamphetamine ingabonakali ekuhlolweni komchamo. Ungakwazi ukuveza futhi ulahle ubisi lwakho okwamanje ukuze ugcine umkhiqizo wobisi.